१५ केजी नक्कली सुन काण्ड: कसको निर्देशनमा जलप लगाइयो ? | Citizen Post News
१५ केजी नक्कली सुन काण्ड: कसको निर्देशनमा जलप लगाइयो ?
२०७७ साउन १७ गते १०:०८
‘बाटामा माटो राखेर त्यसभित्र लुकाइएको अवस्थामा बाहिर जलप लगाइएको १ किलो सुन जस्तै देखिने पदार्थ नियन्त्रणमा लिइएकामा परीक्षण गर्दा चाँदी रहेको पुष्टि भयो,’ परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता केसीले राजधानीसँग भने ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सो पदार्थ दरबारमार्गमा कार्यरत प्रहरी जवान प्रसन्न श्रेष्ठले त्यहाँ लगेर लुकाएको आशंका गरिएको छ । तर, प्रहरीले भने कसले लगेर लुकायो भन्ने विस्तृतमा अनुसन्धानबाट खुल्ने बताएको छ । प्रहरीले घरधनी उमेश श्रेष्ठलाई भने नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रहरीले घटनाको विवरण उठाएको कानुनी मुचुल्कामा समेत घटनास्थल सुन्धारा क्षेत्रलाई मानिएको छ ।
तर शुक्रबार भने फेरि सोही प्रकरणको अर्को रहस्य खुलेको छ । प्रहरीले सुन बरामद गरेको दाबी गरे पनि सुन तस्करले नै प्रहरीको हातमा नै झोला दिएको खुलेको हो । महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गका डिएसपी रञ्जन दाहालको नेतृत्वमा मंगलबार सुन अपरेसन भएको भनिएको थियो ।
डिएसपी दाहाललाई काठमाडौंमा सुन आएको सूचना दरबारमार्ग वृत्तमा सादा पोसाकका प्रहरी जवान प्रसन्न श्रेष्ठले दिएका थिए ।
‘पहिले सुन फ्याँकेर अभियुक्त भागे भन्ने थियो, अहिले प्रहरी जवानलाई नै झोला थमाएर अभियुक्तहरू हिँडेको देखिन्छ । थप अनुसन्धान हुँदै छ,’ सो प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने ।